Video na ọdịyo | December 2019
Isi Video na ọdịyo
Video na ọdịyo
Kedu ihe nchịkọta vidio n'efu maka Windows 7, 8, 10?
Onye nchịkọta vidio - aghọwo otu n'ime mmemme kachasị mkpa na kọmputa kọmputa, karịsịa n'oge na-adịbeghị anya, mgbe ị nwere ike ịse vidiyo na ekwentị ọ bụla, ọtụtụ nwere ese foto, vidiyo nzuzo nke chọrọ ka hazie ma chekwaa. N'isiokwu a, m ga-achọ ilekwasị anya na ndị editọ vidio n'efu maka Windows OS ọhụrụ: 7, 8.
10 ndị na-ekwu okwu mkparịta ụka kachasị mma na eliExpress
Smartphones, mbadamba, laptọọpụ na ngwaọrụ ndị ọzọ "smart" nwere ọtụtụ atụmatụ, ma n'ihi ntakịrị obere ha ha adịghị mma maka egere egwu ọzọ karịa site na ekweisi. Ndị ọkà okwu a wuru n'ime ya dị oke obere iji nye akwa dị elu, ụda doro anya ma dị ụda. Ihe ngwọta nwere ike ịbụ ndị ọkà okwu na-anaghị ebugharị nke na-anaghị egbochi ya na nnwere onwe nke ngwaọrụ ahụ.
Otu faịlụ egwu na nchekwa dị iche iche. Esi ehichapụ egwu ugboro ugboro?
Ezi ụbọchị. Ị maara faịlụ ndị kachasị ewu ewu, ọbụna ma e jiri ya tụnyere egwuregwu, vidiyo na foto? Egwu! Egwu egwu bụ faịlụ kachasị ewu ewu na kọmputa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na egwu na-enyerekarị aka na-arụ ọrụ ma na-ezu ike, na n'ozuzu ya, ọ na-ewepụtụ ụda na-enweghị isi (na site na echiche ndị ọzọ :)).
Ihe iri na abuo bara uru YouTube maka oge niile
Ọtụtụ nde mmadụ bụ ndị ọrụ na YouTube. A na-enye ụlọ ọrụ vidio a kọwara dị iche iche ọtụtụ ngwá ọrụ ndị na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ. Mana ọrụ ahụ nwekwara ụfọdụ atụmatụ zoro ezo. Anyị na-enye nhọrọ nke atụmatụ bara uru nke nwere ike ime ka ndụ ntanetị vidio dị mfe.
Mmemme kachasị mma 10 kachasị maka ịdekọ vidio site na egwuregwu
Ezi ụbọchị. Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-egwu egwuregwu kọmputa, ma ọ dịkarịa ala otu chọrọ ịdekọ oge na vidio ma gosipụta ọganihu ha na ndị ọzọ egwuregwu. Ọrụ a dị ezigbo mma, ma onye ọ bụla nke na-abịa na ya maara na ọ na-esiri ike: vidiyo ahụ na-ebelata, ọ gaghị ekwe omume igwu egwu mgbe ọ na-edekọ, àgwà dị njọ, a naghị anụ ụda, na ihe ndị ọzọ.
Otu esi emepụta ihe ngosi slide (site na foto gị na egwu)
Ndewo Onye ọ bụla nwere foto ya kachasị amasị na nke a na-echefu echefu: ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ, ụbọchị ncheta, na ihe omume ndị ọzọ dị mkpa. Ma site na foto ndị a, ị nwere ike ịmepụta ihe nkiri slide zuru ezu, nke a ga-ele na TV ma ọ bụ ebudata na mmekọrịta. netwọk (gosi ndị enyi gị na ndị maara gị). Ọ bụrụ na afọ 15 gara aga, ka ịmepụta ihe ngosi ngosi dị elu, ị ga-achọ ịnweta "akpa" ezigbo ihe ọmụma, ugbu a ọ bụ iji mara ma nwee ike ijikwa ihe omume abụọ.
Nkeji 10 kacha mma quadcopters na igwefoto 2018
Ibanye na foto ikuku ma ọ bụ windo vidiyo na-apụtaghị na ọ na-ebili elu n'onwe ya. Ahịa nke oge a na-ejupụta na drones nkịtị, nke a na - akpọkwa quadrocopters. Dabere na ọnụahịa, ndị na-emeputa na klas nke ngwaọrụ ahụ, ha nwere ihe mmetụta dị nro ma ọ bụ ihe osise vidiyo dị elu.
Na-echegharị vidiyo na kọmputa, ihe ị ga-eme?
Ndewo Otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu na kọmpụta na-egwu faịlụ mgbasa ozi (ọdịyo, vidiyo, wdg). Ọ bụghị ihe a na-amaghị mgbe kọmputa malitere ịkụda oge mgbe ị na-ekiri vidiyo: oyiyi ahụ na onye ọkpụkpọ ahụ na-egwu na jerks, twitches, ụda ahụ nwere ike ịmalite "ịgha" - n'ozuzu, ịnwere ike ịlele vidio (dịka ọmụmaatụ, ihe nkiri) ... Na nke a obere isiokwu m chọrọ chịkọta isi ihe mere video na kọmputa na-eji kwụsịlata ngwọta ha.
Kedu ka esi mee ụdaolu maka ekwentị mkpanaaka?
Afọ ole na ole gara aga, afọ 10 gara aga, ekwentị mkpanaka bụ "egwuregwu ụmụaka" dị oké ọnụ ahịa na ndị mmadụ nwere ego ha na-eji eme ihe. Taa, telifon bụ ụzọ nkwurịta okwu na onye ọ bụla (ihe karịrị afọ 7-8) nwere ya. Onye ọ bụla n'ime anyị nwere ụtọ nke onwe anyị, ọ bụghị mmadụ niile na-ahọrọ ụda ụda na ekwentị.
Esi ewepụta video site na ihuenyo ma dezie ya (2 na 1)
Ezi ụbọchị. "Ọ ka mma ịhụ otu ugboro karịa ịnụ otu narị ugboro," ka amamihe na-ewu ewu na-ekwu. Na na uche m, ọ bụ 100% ziri ezi. N'ezie, ọtụtụ ihe dị mfe ịkọwaara mmadụ site n'igosi otú e si eme nke a site na iji ihe nlereanya ya, site na ịdekọ vidiyo maka ya na ngebichi, desktọọpụ (ọma, ma ọ bụ screenshots na nkọwa, dị ka m na-eme na blog).
Kedu otu esi ewepu abụ?
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ajụ otu ajụjụ na-akpali mmasị: otu esi egwu egwu, ihe omume, usoro dị mma iji chekwaa ... Ọtụtụ mgbe, ịkwesịrị ịkwụsị ịgbachi na faịlụ egwu, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ịdekọre egwu egwu, bido ibe ya ka ha bụrụ otu abụ. N'ozuzu, ọrụ ahụ dị nnọọ mfe (ebe a, n'ezie, anyị na-ekwu nanị maka ịmepụta faịlụ, ma ọ bụghị idezi ya).
Dekọọ vidiyo na ụda si na kọmputa: nchịkọta ngwanrọ
Ndewo Ọ ka mma ịhụ otu ugboro karịa ịnụ otu narị ugboro 🙂 Nke a bụ ihe okwu na-ewu ewu na-ekwu, ọ ga-abụkwa eziokwu. Ị nwedịrị mgbe ị gbalịrị ịkọwara mmadụ otu esi arụ ọrụ ụfọdụ na PC, na-ejighị vidiyo (ma ọ bụ foto)? Ọ bụrụ na ị kọwapụtara "mkpịsị aka" ihe na ebe ị pịa - ị ga - aghọta mmadụ 1 n'ime 100!
Kedu otu esi ebipu mkpiri site na vidiyo? Mfe na ngwa ngwa!
Ezi ehihie Ịrụ ọrụ na vidiyo bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu, karịsịa na nso nso a (na ike nke PC abụrụla ịhazi foto na vidio, ndị camcorders aghọwokwa ndị nwere ohere maka ọtụtụ ndị ọrụ). N'okwu a dị mkpirikpi, m chọrọ ịhụ otú ị ga - esi jiri ngwa ngwa bepụ iberibe ịchọrọ na faịlụ vidiyo.
Ezigbo nchịkọta iji gbanwee vidiyo 90 degrees
N'ịgbalị ijide oge na-egbuke egbuke na ekwentị, anyị anaghị eche echiche banyere ọnọdụ igwefoto mgbe ị na-agbapụ. Ma mgbe eziokwu ahụ gasịrị, anyị chọpụtara na anyị na-ejide ya, ma ọ bụghị n'ezoghị ọnụ, dịka ọ ga-efu. Ndị na-egwu egwu na-egwu vidiyo ndị dị otú ahụ n'akụkụ akụkụ ma ọ bụ ọbụna n'akụkụ ihu, ọ naghị ekwe omume ikiri ha.
Etu ibudata egwu si VK gaa na kọmputa ma ọ bụ ekwentị
VKontakte bụ otu n'ime netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu. Anyị niile makwaara ihe kpatara ya. E kwuwerị, ebe a, ị nwere ike ịgbanwe ozi, lee vidiyo na foto, ma nke gị ma ndị enyi gị, yana ịge egere egwu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa egwu na kọmputa ma ọ bụ ekwentị gị? A sị ka e kwuwe, ọrụ a abụghị ndị mmepe nke saịtị ahụ.
Olee otú ibudata vidiyo site na Youtube na kọmputa?
Ọkpụkpụ ọhụrụ, nwamba nke ọnyá na nha, ọnụọgụ dịgasị iche iche, mmemme nke ụlọ na professionally mere obere vidiyo - a ga - achọta nke a na YouTube. Kemgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, ọrụ ahụ sitere na ụlọ ahịa na-enweghị atụ nke azụmahịa "maka ya" ruo nnukwu ọnụ ụzọ, ihe dị mkpa n'ahịa mgbasa ozi n'ịntanetị.
Esi ewepu faịlụ vidiyo avi?
N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ụzọ e si ebipụta faịlụ vidiyo na ọdịdị ihu, yana ọtụtụ nhọrọ maka ichekwa ya: na na na-enweghị ntọghata. N'ozuzu, e nwere ọtụtụ mmemme iji dozie nsogbu a, ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị otu narị. Ma otu n'ime ụdị kachasị mma bụ VirtualDub. VirtualDub bụ usoro ihe omume maka ịde faịlụ vidiyo avi.
Mmemme ndị dị mkpa iji dekọọ vidiyo site na kamera weebụ?
Ndewo Taa, kamera dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ ọgbara ọhụrụ, netbooks, mbadamba. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ PC nwere ike inweta ihe a bara uru. Ọtụtụ mgbe, a na-eji igwefoto weebụ eme ihe maka mkparịta ụka na Intaneti (dịka ọmụmaatụ, site na Skype). Ma site n'enyemaka nke igwefoto weebụ ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, dekọọ ozi vidiyo ma ọ bụ naanị mee ndekọ maka nhazi ọzọ.
10 ụdị ekweisi ekwe ntị na-enye iwu na AliExpress
Ọ bụrụ na ike agwụla gị na eriri ebighi ebi na wires, ịchọrọ ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị gị oge ọ bụla na ebe ọ bụla, mgbe ahụ ọ bụ oge iche echiche banyere ịzụta ekwe ntị ikuku dị elu. Echekwala ha maka enyemaka ga-enyere anyị aka nyochaa isi ekwe ntị kacha mma na Aliexpress. Ọdịnaya 10. Moloke IP011 - 600 rubles 9.
Kedu esi mepee mkv faịlụ?
MKV bụ ụdị ọkpụkpọ vidiyo ọhụrụ nke na-aghọwanyewanye ewu ewu kwa ụbọchị. Dị ka a na-achị, ọ na-ekesa HD video na ọtụtụ ọdịyo egwu egwu. Tụkwasị na nke a, faịlụ ndị a na-eburu ọtụtụ ohere na diski ike, ma àgwà nke vidio nke usoro a na-enye - na-ekpuchi njirimara ya nile!
https://termotools.com ig.termotools.com © Video na ọdịyo 2019